e-Government အတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ – Internet Journal |
Apr 10, 2018Comments Off on e-Government အတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ0251
“e-Government ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ ပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ မခက်ပါဘူး၊ အခုခေတ် ပိုလွယ်သေးတယ်” လို့ ဦးတင်ဝင်းအောင် (Patron – Myanmar Computer Industry Association), Chairman, Myanma Computer Company Limited. (MCC) ကပြောပါတယ်။ e-Government အကောင်အ
ထည်ဖော်ဖို့ကိစ္စရပ်ဟာ ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်း၊ လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း မတ်လ ၁၆ ရက်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ICT Industry Development Workshop မှာ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအပြောင်းအလဲ၊ ပေါ်လစီအပြောင်းအလဲကြောင့် အကောင်
အထည်ဖော်မှု နှောင့်နှေးတာလားဆိုတဲ့ အလားသဏ္ဍာန်မေးခွန်း မေးမြန်းမှုအပေါ် ဖြေကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေးကို ကဏ္ဍအားဖြင့် ခွဲထားကြမယ်၊ အစိုးရဆိုတာကတော့ ခဏခဏပြောင်းမှာပဲ၊ သူတို့ အရင်တုန်းကလောက် ၁၀ နှစ် နှစ် ၂၀
အုပ်ချုပ်သွားတယ်၊ အခုကတော့ ငါးနှစ်တစ်ကြိမ်ပြောင်းတယ်၊ အစိုးရပြောင်းတိုင်းသာ စီးပွားရေး ပေါ်လစီကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး” လို့ ဦးတင်ဝင်းအောင် ကပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာ e-Government ဦးဆောင်ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီကော်မတီမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်
ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နာယကအဖြစ်ပါဝင်ပြီး ဒုတိယသမ္မတ (၁) ဦးမြင့်ဆွေက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်
သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်အနေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီထဲမှာ ပါဝင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ဦးက ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ e-Government ဦးဆောင်ကော်မတီရဲ့ ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ဧပြီ ၄ ရက်က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ “e-Government ပတ်သက်လို့ ကျွန်မတို့ အစကတည်းက စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးချထားတဲ့မူဝါဒ ၁၂ ချက်ထဲမှာ တစ်ချက်ပါဝင်ပါတယ်၊
အဲဒီအထဲမှာ ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတာ ပါဝင်ပါတယ်၊ ဒါကို e-Government ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာ အဲဒီဘက်က နှောင့်နှေးနေတာကိုလည်း သတိပြုမိပါတယ်၊ e-Government မြန်မြန်လုပ်ဖို့၊ တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် အချက် ၃ ချက်က အဓိကဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်ရှိမယ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်ရှိမယ်၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်ချက်ရှိမယ်” လို့ ဦးဆောင်ကော်မတီနာယက နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
e-Government ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ အောင်မြင်ဖို့ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ e- Government အောင်မြင်တဲ့ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာ ဖြစ်ကြောင်း အဲဒီလိုဆောင်
ရွက်သွားမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှာ ဖြစ်တယ်လုိ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ e-Government Conference and ICT Exhi-
bition 2017 အခမ်းအနားမှာ ပညာရှင်တွေကပြောကြားခဲ့ဖူးပါ တယ်။ “ကုမ္ပဏီတွေရဲ့နောက်မှာ ပါတနာတွေဖွဲ့ပြီး e-Government
ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးပါပဲ၊ ဘတ်ဂျက်မရှိဘူးဆိုပြီး နှောင့်နှေး မနေစေချင်ပါဘူး၊ Private က
ဘတ်ဂျက်ရှာပြီးတော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ အစိုးရဘက်က ထိန်းကွပ်ပေးရုံပါပဲ” လို့ ဦးသိန်းဦး (Patron – Myanmar Computer Federation), Chairman, ACE Data Consulting Services Co., Ltd. (ACE) အဲဒီအခမ်းအနားမှာ ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာတွေကို ပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီး ဥပဒေဆိုင်ရာတွေ ချမှတ်ခြင်းနဲ့ ထိန်းကွပ်ခြင်းတွေကို အစိုးရဘက်က ဆောင်ရွက်ရင် အောင်မြင်မယ်လို့ မြင်မိကြောင်း ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက လွတ်လပ်ရေးရပြီး ကတည်းက အစိုးရအဆက်ဆက်ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာ အစိုးရသစ်တစ်ခုဖြစ် လာပေမယ့် ပေါ်လစီပြောင်းတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ e-Government ကိုလုပ်တာ ဟိုးအစောပိုင်းကတည်းကလုပ်တာ၊ အစောပိုင်းကတည်းက လုပ်တဲ့အခါမှာ ဒီလိုတောင်မှ မဟုတ်ဘူး၊ အာဏာရှိတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နဲ့ကို ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းကို နားထောင်ပြီးတော့လုပ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ မမျှော်လင့်ဘဲ အဲဒီနိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်က တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်သွားတော့ နောက်တက်လာတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နဲ့လုပ်တယ်၊ အဲဒီ Level နဲ့ အလုပ်လုပ်တာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ မမျှော်လင့်တာ ဖြစ်သွားပြန်တော့ တော်တော်လေးအခက်တွေ့တယ်၊ ရပ်သွားပြန်ရော” လို့ ဦးတင်ဝင်းအောင်က တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲကို ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ e-Gover-nment ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အချက်သုံးချက်နဲ့ တိုင်းတာနိုင်မယ်လို့ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး
ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ e-Government Conference and ICT Exhibition 2017 အခမ်းအနားမှာ ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအချက်သုံးချက်ကတော့ (၁) အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ (၂) တယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်းဆိုင်ရာ ညွှန်းကိန်း (၃) လူသားစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုညွှန်းကိန်းတို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “e-Government ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဒီသုံးခုအချိုးညီညီ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ e-Government ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ စွမ်းဆောင်ပေးမယ့် အဓိကအထောက်အကူပြု အပိုင်းသုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ နည်းပညာအသုံးချမှု၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ဌာနများက ပြန်လည်သုံးသပ် ပြုပြင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီအပိုင်းမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းက အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်လာကြောင်း၊ ဒါကြောင့် e-Government လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို
ဦးစီးဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာ စနစ်ကျတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်လာမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းပုံစံတစ်ချို့ကိုလည်း ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းလဲဖို့က နည်းပညာထက် အရေးကြီးကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ e-Government ဆောင်ရွက်ချက်ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက စတင်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ e-Government ညွှန်းကိန်းကိုကြည့်ရင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ အဆင့် ၁၆၉ မှာရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါ
ဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၃ မှာ ၁၆၉ ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ e-Government လုပ်ငန်း စဉ်တွေကို ဆက်လက်အောင်မြင်စွာ အကောင်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲပြီး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြထားချက်အရ သိရပါတယ်။ ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး e-Government လုပ်ငန်းစဉ်
တွေ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လုပ်ငန်းတွေ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြောင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဖော်ပြ ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ
လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ (က) Data Center သို့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့် Access Network များအား တည်ဆောက်၊ ချဲ့ထွင်၊ ပြုပြင်၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း။ (Network Development & Mainten-ance)၊ (ခ) Data Center ရှိ Server များနှင့် အခြားဆက်စပ်
စက်ပစ္စည်းများ (Switch, Router, Firewall, UPS, Generator) အား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ (Servers and Hardware Maintenance)၊ (ဂ) Server များရှိ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ အချက်အလက်များ ကျိုးပေါက်မှုမရှိစေရန် လိုအပ်သောလုံခြုံရေး အစီအမံများဆောင်ရွက်ခြင်း။ (Data Security) စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အဲဒါအပြင် (ဃ) ဝန်ကြီးဌာန များအားလုံးမှ အသုံးပြုလျက်ရှိသော GPMS နှင့် EDMS App-lication များ၊ System များ၊ Database များ၊ Software များ အား ပုံမှန်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ (Soft-ware Maintenance)၊ (င) Application များ၊ System များ ပျက်ဆီးချို့ယွင်းပါက ပြန်လည် ပြုပြင်ရေးသားပေးခြင်းနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပြုပြင်ရေးသားပေးခြင်း။ (Soft-ware Modification and Cus-tomization)၊ (စ) တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့် ခေတ်စနစ်၊ နည်းပညာများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် Application များ၊ System များအား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ (Software Upgrading)၊ (ဆ) Database များ ပျက်ဆီးချို့ယွင်းပါက ပြန်လည်ပြုပြင် ရေးသားပေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ SQL Design များပြုပြင်
ရေးသားပေးခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ (Database Modification, Customization, Upgrading)၊ (ဇ) ဝန်ကြီးဌာနများ၏ Data များ ပုံမှန်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် Data ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ပါက ပြန်လည်ရယူပေးခြင်း။ (Data Backup and Recovery) စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ပါဝင်တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ (ဈ) ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုများ၊ Access, Autho-rization, Authentication System များအား စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း။ (Monitoring and Control) နဲ့ (ည) ဝန်ကြီးဌာနများအားလုံးမှ e-Government Application များအား ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ပုံမှန်နှင့်မွမ်းမံ သင်တန်းများအား သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း၊ Workshop, Seminor များ ကျင်းပပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံလာသော အခက်အခဲများအား ကူညီဖြေရှင်း၍ နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးခြင်း။ (Training and Help Desk) လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
e-Government အတှကျ ဘာတှလေိုအပျမလဲ
“e-Government ကို ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာကို ကြှနျတျောတို့တှေ ပွောတဲ့အတိုငျး လိုကျလုပျမယျဆိုရငျ အောငျမွငျပါတယျ၊ တကယျတော့ မခကျပါဘူး၊ အခုခတျေ ပိုလှယျသေးတယျ” လို့ ဦးတငျဝငျးအောငျ (Patron – Myanmar Computer Industry Association), Chairman, Myanma Computer Company Limited. (MCC) ကပွောပါတယျ။ e-Government အကောငျအ
ထညျဖျောဖို့ကိစ်စရပျဟာ ခကျခဲတဲ့ကိစ်စမဟုတျကွောငျး၊ လှယျကူတဲ့ ကိစ်စဖွဈကွောငျး မတျလ ၁၆ ရကျက ကငျြးပခဲ့တဲ့ ICT Industry Development Workshop မှာ ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အစိုးရအပွောငျးအလဲ၊ ပျေါလစီအပွောငျးအလဲကွောငျ့ အကောငျ
အထညျဖျောမှု နှောငျ့နှေးတာလားဆိုတဲ့ အလားသဏ်ဍာနျမေးခှနျး မေးမွနျးမှုအပျေါ ဖွကွေားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ “နိုငျငံရေးနဲ့ စီးပှားရေးကို ကဏ်ဍအားဖွငျ့ ခှဲထားကွမယျ၊ အစိုးရဆိုတာကတော့ ခဏခဏပွောငျးမှာပဲ၊ သူတို့ အရငျတုနျးကလောကျ ၁၀ နှဈ နှဈ ၂၀
အုပျခြုပျသှားတယျ၊ အခုကတော့ ငါးနှဈတဈကွိမျပွောငျးတယျ၊ အစိုးရပွောငျးတိုငျးသာ စီးပှားရေး ပျေါလစီကိုပွောငျးမယျဆိုရငျ ဘယျတော့မှ တိုးတကျမှာမဟုတျဘူး” လို့ ဦးတငျဝငျးအောငျ ကပွောပါတယျ။
လကျရှိမှာ e-Government ဦးဆောငျကျောမတီကို ဖှဲ့စညျးပွီးဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ အဲဒီကျောမတီမှာ နိုငျငံတျောအတိုငျ
ပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက နာယကအဖွဈပါဝငျပွီး ဒုတိယသမ်မတ (၁) ဦးမွငျ့ဆှကေ ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ တာဝနျယူဆောငျရှကျ
သှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ ကှနျပြူတာအသငျးခြုပျအနနေဲ့ အကောငျအထညျဖျောဆောငျရေး ကျောမတီထဲမှာ ပါဝငျကွောငျး မွနျမာနိုငျငံ ကှနျပြူတာအသငျးခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌဦးခှနျဦးက ပွောကွားခဲ့ဖူးပါတယျ။ e-Government ဦးဆောငျကျောမတီရဲ့ ပထမအကွိမျ လုပျငနျးညှိနှိုငျး အစညျးအဝေးကို ဧပွီ ၄ ရကျက နပွေညျတျောမှာ ကငျြးပခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ “e-Government ပတျသကျလို့ ကြှနျမတို့ အစကတညျးက စီးပှားရေးနဲ့ ပတျသကျပွီးခထြားတဲ့မူဝါဒ ၁၂ ခကျြထဲမှာ တဈခကျြပါဝငျပါတယျ၊
အဲဒီအထဲမှာ ဖွဈမွောကျအောငျ လုပျမယျဆိုတာ ပါဝငျပါတယျ၊ ဒါကို e-Government ဖွဈမွောကျအောငျ လုပျမယျဆိုရငျလညျး ကြှနျမတို့ရဲ့ဒီနှဈအတှငျးမှာ အဲဒီဘကျက နှောငျ့နှေးနတောကိုလညျး သတိပွုမိပါတယျ၊ e-Government မွနျမွနျလုပျဖို့၊ တိုးတကျဖို့ဆိုရငျ အခကျြ ၃ ခကျြက အဓိကဖွဈပါတယျ၊ ကြှမျးကငျြမှုလိုအပျခကျြရှိမယျ၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုလိုအပျခကျြရှိမယျ၊ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှု လိုအပျခကျြရှိမယျ” လို့ ဦးဆောငျကျောမတီနာယက နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောကွားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
e-Government ကို အကောငျအထညျဖျောရာမှာ အောငျမွငျဖို့ အပိုငျးနှဈပိုငျးနဲ့ ဆောငျရှကျသှားဖို့ လိုအပျမှာဖွဈကွောငျး၊ e- Government အောငျမွငျတဲ့ နိုငျငံတျောတျောမြားမြားမှာ အစိုးရနဲ့ ပုဂ်ဂလိက ပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွတာ ဖွဈကွောငျး အဲဒီလိုဆောငျ
ရှကျသှားမယျဆိုရငျ အောငျမွငျမှာ ဖွဈတယျလို့ နပွေညျတျောမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ e-Government Conference and ICT Exhi-
bition 2017 အခမျးအနားမှာ ပညာရှငျတှကေပွောကွားခဲ့ဖူးပါ တယျ။ “ကုမ်ပဏီတှရေဲ့နောကျမှာ ပါတနာတှဖှေဲ့ပွီး e-Government
ကိုအကောငျအထညျဖျောနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှေ အမြားကွီးပါပဲ၊ ဘတျဂကျြမရှိဘူးဆိုပွီး နှောငျ့နှေး မနစေခေငျြပါဘူး၊ Private က
ဘတျဂကျြရှာပွီးတော့ လုပျနိုငျပါတယျ၊ အစိုးရဘကျက ထိနျးကှပျပေးရုံပါပဲ” လို့ ဦးသိနျးဦး (Patron – Myanmar Computer Federation), Chairman, ACE Data Consulting Services Co., Ltd. (ACE) အဲဒီအခမျးအနားမှာ ပွောကွားခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာတှကေို ပုဂ်ဂလိကအနနေဲ့ တာဝနျယူဆောငျရှကျပွီး ဥပဒဆေိုငျရာတှေ ခမြှတျခွငျးနဲ့ ထိနျးကှပျခွငျးတှကေို အစိုးရဘကျက ဆောငျရှကျရငျ အောငျမွငျမယျလို့ မွငျမိကွောငျး ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ “ကြှနျတျောတို့နိုငျငံက လှတျလပျရေးရပွီး ကတညျးက အစိုးရအဆကျဆကျပွောငျးလာတဲ့အခါမှာ အစိုးရသဈတဈခုဖွဈ လာပမေယျ့ ပျေါလစီပွောငျးတယျ၊ ကြှနျတျောတို့ e-Government ကိုလုပျတာ ဟိုးအစောပိုငျးကတညျးကလုပျတာ၊ အစောပိုငျးကတညျးက လုပျတဲ့အခါမှာ ဒီလိုတောငျမှ မဟုတျဘူး၊ အာဏာရှိတဲ့ နိုငျငံခေါငျးဆောငျနဲ့ကို ကြှနျတျောတို့ပွောတဲ့အတိုငျးကို နားထောငျပွီးတော့လုပျတယျ၊ ဒါပမေဲ့ မမြှျောလငျ့ဘဲ အဲဒီနိုငျငံ့ ခေါငျးဆောငျက တဈမြိုးတဈမညျဖွဈသှားတော့ နောကျတကျလာတဲ့ နိုငျငံခေါငျးဆောငျနဲ့လုပျတယျ၊ အဲဒီ Level နဲ့ အလုပျလုပျတာပဲ၊ ဒါပမေဲ့ မမြှျောလငျ့တာ ဖွဈသှားပွနျတော့ တျောတျောလေးအခကျတှတေ့ယျ၊ ရပျသှားပွနျရော” လို့ ဦးတငျဝငျးအောငျက တှကွေုံ့ရတဲ့ အခကျအခဲကို ပွောပါတယျ။
နိုငျငံတဈနိုငျငံရဲ့ e-Gover-nment ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကို အခကျြသုံးခကျြနဲ့ တိုငျးတာနိုငျမယျလို့ ပို့ဆောငျရေးနှငျ့ ဆကျသှယျရေး
ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသနျ့စငျမောငျက နပွေညျတျောမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ e-Government Conference and ICT Exhibition 2017 အခမျးအနားမှာ ပွောကွားခဲ့ဖူးပါတယျ။ အဲဒီအခကျြသုံးခကျြကတော့ (၁) အှနျလိုငျးဝနျဆောငျမှုတှေ ဘယျလောကျရှိသလဲ (၂) တယျလီကှနျမွူနီကေးရှငျးဆိုငျရာ ညှနျးကိနျး (၃) လူသားစှမျးရညျဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျမှုညှနျးကိနျးတို့ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ “e-Government ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့ ဒီသုံးခုအခြိုးညီညီ တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးလာဖို့ လိုအပျပါတယျ၊ ဒီနရောမှာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ e-Government ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာဖို့ စှမျးဆောငျပေးမယျ့ အဓိကအထောကျအကူပွု အပိုငျးသုံးပိုငျးဖွဈတဲ့ နညျးပညာအသုံးခမြှု၊ လုပျငနျးဆောငျရှကျမှု လုပျငနျးစဉျမြားနဲ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုတို့ကို ဌာနမြားက ပွနျလညျသုံးသပျ ပွုပွငျကွရမှာ ဖွဈပါတယျ” လို့ ပွောပါတယျ။ အဲဒီအပိုငျးမှာ စီမံခနျ့ခှဲမှုအပိုငျးက အရေးကွီးဆုံး ဖွဈလာကွောငျး၊ ဒါကွောငျ့ e-Government လုပျငနျးစဉျတှကေို
ဦးစီးဦးဆောငျတဲ့နရောမှာ စနဈကတြဲ့စီမံခနျ့ခှဲမှု လိုအပျလာမှာဖွဈပွီး လကျရှိဆောငျရှကျနတေဲ့ လုပျငနျးပုံစံတဈခြို့ကိုလညျး ပွနျလညျ သုံးသပျဖို့ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ ပိုမိုမွနျဆနျတဲ့ပုံစံမြိုးပွောငျးလဲဖို့က နညျးပညာထကျ အရေးကွီးကွောငျး ဆကျလကျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ e-Government ဆောငျရှကျခကျြကို ၂၀၀၄ ခုနှဈလောကျကတညျးက စတငျခဲ့တာလို့ သိရပါတယျ။ လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ e-Government ညှနျးကိနျးကိုကွညျ့ရငျ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ အဆငျ့ ၁၆၉ မှာရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ အဲဒါ
ဟာ နိုငျငံပေါငျး ၁၉၃ မှာ ၁၆၉ ရှိတာ ဖွဈပါတယျ။ ပို့ဆောငျရေးနှငျ့ ဆကျသှယျရေး ဝနျကွီးဌာနအနနေဲ့ e-Government လုပျငနျး စဉျတှကေို ဆကျလကျအောငျမွငျစှာ အကောငျဖျောဆောငျနိုငျရေးအတှကျ စီမံကိနျးမြားရေးဆှဲပွီး ကွိုးပမျးဆောငျရှကျနတေယျလို့ ဝကျဘျဆိုကျမှာ ဖျောပွထားခကျြအရ သိရပါတယျ။ ဝနျကွီးဌာနတှနေဲ့ အစိုးရအဖှဲ့အစညျးတှအေားလုံး e-Government လုပျငနျးစဉျ
တှေ အောငျမွငျစှာ ဆောငျရှကျနိုငျဖို့ လုပျငနျးတှေ ဝနျဆောငျမှုပေးနကွေောငျး ဝကျဘျဆိုကျမှာဖျောပွ ထားတာတှရေ့ပါတယျ။ အဲဒီ
လုပျငနျးတှထေဲမှာ (က) Data Center သို့ ခြိတျဆကျအသုံးပွုရနျ လိုအပျသညျ့ Access Network မြားအား တညျဆောကျ၊ ခြဲ့ထှငျ၊ ပွုပွငျ၊ ထိနျးသိမျးခွငျး။ (Network Development & Mainten-ance)၊ (ခ) Data Center ရှိ Server မြားနှငျ့ အခွားဆကျစပျ
စကျပစ်စညျးမြား (Switch, Router, Firewall, UPS, Generator) အား ပွုပွငျထိနျးသိမျးခွငျး။ (Servers and Hardware Maintenance)၊ (ဂ) Server မြားရှိ ဝနျကွီးဌာနမြား၏ အခကျြအလကျမြား ကြိုးပေါကျမှုမရှိစရေနျ လိုအပျသောလုံခွုံရေး အစီအမံမြားဆောငျရှကျခွငျး။ (Data Security) စတာတှေ ပါဝငျပါတယျ။
အဲဒါအပွငျ (ဃ) ဝနျကွီးဌာန မြားအားလုံးမှ အသုံးပွုလကျြရှိသော GPMS နှငျ့ EDMS App-lication မြား၊ System မြား၊ Database မြား၊ Software မြား အား ပုံမှနျလုပျငနျး ဆောငျရှကျနိုငျရနျ ပွုပွငျထိနျးသိမျးခွငျး။ (Soft-ware Maintenance)၊ (င) Application မြား၊ System မြား ပကျြဆီးခြို့ယှငျးပါက ပွနျလညျ ပွုပွငျရေးသားပေးခွငျးနှငျ့ ဝနျကွီးဌာနမြား၏ လိုအပျခကျြနှငျ့အညီ ပွုပွငျရေးသားပေးခွငျး။ (Soft-ware Modification and Cus-tomization)၊ (စ) တိုးတကျပွောငျးလဲလာသညျ့ ခတျေစနဈ၊ နညျးပညာမြားနှငျ့ ကိုကျညီမှုရှိစရေနျ Application မြား၊ System မြားအား အဆငျ့မွှငျ့တငျခွငျး။ (Software Upgrading)၊ (ဆ) Database မြား ပကျြဆီးခြို့ယှငျးပါက ပွနျလညျပွုပွငျ ရေးသားပေးခွငျး၊ သကျဆိုငျရာဝနျကွီးဌာန၏ လိုအပျခကျြနှငျ့အညီ SQL Design မြားပွုပွငျ
ရေးသားပေးခွငျးနှငျ့ အဆငျ့မွှငျ့တငျခွငျး။ (Database Modification, Customization, Upgrading)၊ (ဇ) ဝနျကွီးဌာနမြား၏ Data မြား ပုံမှနျသိမျးဆညျးခွငျးနှငျ့ Data ဆုံးရှုံးမှုဖွဈပျေါပါက ပွနျလညျရယူပေးခွငျး။ (Data Backup and Recovery) စတဲ့ လုပျငနျးတှေ ပါဝငျတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ (စြ) ဝနျကွီးဌာနမြား၏ ခြိတျဆကျအသုံးပွုမှုမြား၊ Access, Autho-rization, Authentication System မြားအား စောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုခွငျး။ (Monitoring and Control) နဲ့ (ည) ဝနျကွီးဌာနမြားအားလုံးမှ e-Government Application မြားအား ကြှမျးကငျြစှာ အသုံးပွုနိုငျရနျနှငျ့ ထိရောကျစှာ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျရနျ ပုံမှနျနှငျ့မှမျးမံ သငျတနျးမြားအား သငျကွားပို့ခပြေးခွငျး၊ Workshop, Seminor မြား ကငျြးပပေးခွငျးနှငျ့ လုပျငနျးဆောငျရှကျရာတှငျ တှကွေုံ့လာသော အခကျအခဲမြားအား ကူညီဖွရှေငျး၍ နညျးပညာအထောကျအပံ့ပေးခွငျး။ (Training and Help Desk) လုပျငနျးတှကေိုလညျး ဆောငျရှကျမယျလို့ သိရပါတယျ။
Previous PostiPad Pro နဲ့ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ၅၉၉ ဒေါ်လာတန် HP Chromebook x2
Next Postဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာနှစ်ခုအား ပြည်သူ့လွှတ်တော် တွေ့ဆုံခဲ့